EU To Lift 'Ruinous' Economic Sanctions Against Zimbabwe
Some European Union (EU) countries have reportedly expressed their intention to have sanctions imposed on Zimbabwe for nearly two decades lifted
It is a new dawn in Zimbabwe and it is only natural for good tidings to accompany it.
Few weeks after the 37-year reign of former President Robert Mugabe was brought to an abrupt end, some European Union (EU) countries have reportedly expressed their intention to have sanctions imposed on Zimbabwe for nearly two decades lifted.
The honorary consul for Zimbabwe in Spain, Jose Maria Camallonga was quoted as saying that President Emmerson Mnangagwa’s optimism and enthusiasm towards reforms had convinced some countries in the European block to request regional executives to lift the sanctions.
ALSO READ: Transport Union Leader's Aide Shot Dead in Lagos
The EU and the United States imposed sanctions against Zimbabwe in 2000 after they accused ex-president Robert Mugabe of trampling on human rights, rigging elections and repression of press freedom - accusations that the veteran leader denied.
"The lifting of the sanctions would mean a substantial boost to Zimbabwe’s economy, especially in terms of foreign investments. Once the sanctions have been lifted and reforms are under way, Zimbabwe can start to attract businesses to carry out investment and projects in numerous sectors such as mining, tourism and infrastructure," Camallonga was quoted as saying.
This came almost a month after the Mnangagwa's government slammed the main opposition Movement for Democratic Change (MDC) Alliance for reportedly advocating for the continuation of the "ruinous" sanctions.